Cooking – WunYan
ထောပတ်သီး ကျောက်ကျော လုပ်နည်း
Posted on February 22, 2019 by whuk-46651
ထောပတ်သီး ကျောက်ကျောကို စားဖို့ ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်တာ မဟုတ်ဘဲ.. အသစ်အဆန်း နည်းလမ်းရှာတဲ့ အနေနဲ့ စမ်းသပ် လုပ်ကြည့်တာ ဖြစ်လို့ ပါဝင်ပစ္စည်း အချိုးတွေကို နည်းနည်းဘဲသုံးထားပါတယ်.. လိုက်လုပ်သူတွေ အဖို့ တိုင်းတာတဲ့ ခွက်တွေ ဇွန်းတွေ မရှိရင် လိုက်လုပ်ရတာ နည်းနည်း ခက်ပါလိမ့်မယ်..။ ပါဝင်သော ပစ္စည်းများ 1. ထောပတ်သီး ၁လုံး 2. နို့ဆီ ၁ စားပွဲတင်ဇွန်း…
ထမင်းချက်တဲ့အခါ အိမ်ရှင်မတိုင်း မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ နည်းလမ်းများ
နေ့စဉ်စားသုံးမှုမှာ အဓိက အစားအစာတမျိုးဖြစ်တဲ့ ထမင်းချက်ပြုတ်တာဟာ အပေါ်ယံအားဖြင့်တော့ လွယ်ကူတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ထမင်းဖြစ်ဖို့အတွက် အိမ်ရှင်မတွေကို အခုဖော်ပြပေးမယ့် အချက်တွေက အကူအညီပေးနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) ရာသီဥတု အပူရှိန်ကြောင့် ထမင်းတွေ အလွယ်တကူ သိုးမသွားစေဖို့အတွက် ဆားအနည်းငယ်လောက်ကို ထမင်းချက်တဲ့အခါ ဖြူးပြီးထည့်နိုင်သလို ထမင်းကြမ်းတွေကို ပြန်နွှေးစားတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း ဆားအနည်းငယ် ဖြူးပေးခြင်းက ထမင်းက အနံ့အသက်တွေကို ပျောက်ကင်းစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၂)…
ကလေးလူကြီး အားလုံးကြိုက်ပြီး ဝမ်းမှန်စေတဲ့ အိမ်တွင်း ဒိန်ချဉ် လုပ်နည်း
ဒိန်ချဉ် လုပ်နည်းလေး မေးထားလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နွားနို့၁ ပိသာကို ဆူအောင်ကျိုပါ။ ကျိုတဲ့အခါ ဆူရုံလေးပဲ မထားပါနဲ့။ ကြာကြာလေး ကျိုပါ။ တအားလည်း မပျစ်ပါစေနဲ့။ ပြီးရင် မီးဖိုပေါ်က ချပြီး အအေးခံပါ။ လုံးဝ အေးသွားတဲ့အထိ မစောင့်ရပါ။ ( နွေးနွေးလေးမှာ အချဉ် ကို ထည့်ရမှာမို့ ပါ) လက်ညိုးကို ထည့်ကြည့်လို့ အပူခံနိုင်တယ်ဆိုရုံလေးပေါ့။…
အရမ်းမွှေးဆိမ့်တဲ့ လဖက်ကြက်ဥ ပြုလုပ်နည်း
ကြက်ဥ ၁၀ လုံးစာ လုပ်ရတာ လွယ်ကူပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်း – ကြက်ဥ၁၀လုံး – လက်ဖက်ခြောက် ထမင်းစားဇွန်း ၂ဇွန်း – နာနတ်ပွင့် ၄ ပွင့် – ကရဝေးရွက် ၂ ရွက် – ဂျင်း ၂ ပြား – သစ်ဂျပိုးခေါက် ၁ ခု – ငရုပ်သီး အနီခြောက် ၂…
သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ရိုးရာနည်းအတိုင်း စပျစ်ဝိုင် လုပ်နည်း စပျစ်သီး ပေါ်ချိန်ဆိုတော့ ရိုးရာနည်းအတိုင်း စပျစ်ဝိုင် လုပ်နည်းလေး ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာ့နည်း မြန်မာဟန်နဲ့ ဝိုင်စိမ်တဲ့နည်းလမ်း အဆင့်ဆင့်ပါ။ သန့်ရှင်းတယ် ဈေးသက်သာတယ် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တယ်။ စပျစ်သီးကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ပန်းသီး နာနတ်သီး မက်မန်းသီး စသဖြင့်တွေကိုလဲ ဒီနည်းအတိုင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလေးကို သိပြီးသူများလည်း ရှိမယ်။ မသိသေးသူများလဲ ရှိမယ်။…
စားလို့ အရမ်းကောင်းတဲ့ ၀က်သား ၃ ထပ်သား အကြွပ်ကြော် ကြော်နည်း
စားလို့ အရမ်းကောင်းတဲ့ ၀က်သား ၃ ထပ်သား အကြွပ်ကြော် ကြော်နည်း (၁) ရေနွေးဆူအောင်တည်ထားပါ။ သကြားအနည်းငယ်နဲ့ ပဲငံပြာရည်(အကြည်)ထည့်ပြီး ၀က်သား ၃ ထပ်သားကို ၅ မိနစ်ခန့် ပြုတ်ပါ။ (၂) ၀က်သားကို ဆယ်ယူပြီး အခေါက်ဘက်ကို ဇွန်းခရင်းဖြင့် နေရာအနှံ့ကို ထိုးဆွထားပါ။ (၃) ရှာလကာရေ၊ ဆားအနည်းငယ်တို့ကို အခေါက်ထဲစိမ့်ဝင်နေအောင် ပွတ်လိမ်းပေးထားပါ။ (၄) ငှက်ပျောရွက် သို့…
ကြက်ဥပူတင်းကို အိမ်တွင် အလွယ် ပြုလုပ်နည်း
ပူတင်း အမျိုးမျိုး ရှိသလို ၊ လုပ်နည်းလည်း ၊ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် ။ အိမ်တွင် လုပ်စားလို့ရမည့် အလွယ်နည်းလေးပါ ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ ကြက်ဥ လေးလုံး၊ နို့စိမ်း တစ်ဗူး၊ သကြား လေးဇွန်း (စားပွဲတင်ဇွန်း)၊ ဂျုံ တစ်ဇွန်း (လဖက်ရည်ဇွန်း)၊ ဗနီလာအနံ့ တစ်ဇွန်း (လဖက်ရည်ဇွန်း) ပြုလုပ်နည်း သကြား ၃ ဇွန်း ကို ရေမြုပ်ရုံ…
လတ်ဆတ်ပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ် ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်နည်း
ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီး အဆင့်အတန်းရှိရှိ စားစေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သာ။ အစစ်တွေရှိနေတာကို။ အတုတွေ မစားကြပါနဲ့။ တစ်နေ့က face book မှာ တွေ့လိုက်တယ်။ ” မုံရွာမှာ ခရမ်းချဉ်သီး ၁ ပိသာ ၂၀၀ ကျပ်တဲ့ ” ။ မြန်မာပြည်မှာ တောင်လိုပုံ လို့ ပေါများလှပါတယ်။ ” ကျနော်တွေးမိတယ် ” ” သြော်” ” ခရမ်းချဉ်သီးတွေသာ ပေါများနေတာ…